﻿Download Microsoft Office Proofing Tools 2013 - Bekee from Official Microsoft Download CenterWarning: This site requires the use of scripts, which your browser does not currently allow.See how to enable scriptsDownload CenterMenuSearchSearch Download Center
AfrikaansArabicAssameseAzeri (Latin)BaskiBekeeBengali (Bangladesh)Bengali (India)CatalanChainis (di mfe)Chainis (otu okwesiri)CzechDanishDutchFinnishFrenchGalicianGreekGujaratiHausaHebrewHindiIgboIkinyarwandaIrishisiXhosaisiZuluJaman KannadaKazakhKiswahiliKonkaniKyrgyzMalay (Brunei Darussalam)Malay (Malaysia)MalayalamMalteseMāoriMarathiNepaliOnye AlbaniaOnye ArmeniaOnye Bosnia (Latin)Onye BulgariaOnye CroatiaOnye EstoniaOnye GeorgiaOnye HungaryOnye IcelandOnye Indonesia Onye ItalyOnye Japan Onye KoreaOnye LatviaOnye LithuaniaOnye LuxembourgOnye Macedonia (Bubu Yugoslav Repọbliki nke Macedonia)Onye Norway (Bokmål)Onye Norway (Nynorsk)Onye Portuguese (Portugal)Onye RomaniaOnye RussiaOnye Serbia (Cyrillic)Onye Serbia (Latin)Onye SloveniaOnye SpainOnye SwedenOnye UkraineOriyaPashtoPersianPolishPortuguese (Brazil)PunjabiRomanshScottish Gaelic - United KingdomSerbian (Cyrillic) - Bosnia and HerzegovinaSesotho sa LeboaSetswana (South Africa)SinhalaSlovakTamilTatarTeluguThaiTurkishUrdu - PakistanUzbek (Latin)VietnameseWelshWolofYoruba
NbudataNbudataCloseHọta nbudata ị chọrọAha faịlụNha faịlụ
proofingtools_ig-ng-x86.exe849 KB849 KB
proofingtools_ig-ng-x64.exe900 KB900 KB
Download Summary:KBMBGBYou have not selected any file(s) to download.Total Size: 0AzụOzo na-esoteMicrosoft recommends you intall a Download Manager.A download manager is recommended for downloading multiple files.Microsoft Download ManagerManage all your internet downloads with this easy-to-use manager.It features a simple interface with many customizable options:Download multiple files at one timeDownload large files quickly and reliablySuspend active downloads and resume downloads that have failedWould you like to install the Microsoft Download Manager?Yes, install Microsoft Download Manager(recommended)No, thanksWhat happens if I don't install a download manager?Close
Why should I install the Microsoft Download Manager?Generally, a download manager enables downloading of large files or multiples files in one session.Many web browsers, such as Internet Explorer 9, include a download manager.Stand-alone download managers also are available, including the Microsoft Download Manager.if you do not have a download manager installed, and still want to download the file(s) you've chosen, please note:You may not be able to download multiple files at the same time.In this case, you will have to download the files individually.(You would have the opportunity to download individual files on the "Thank you for downloading" page after completing your download.)Files larger than 1 GB may take much longer to download and might not download correctly.You might not be able to pause the active downloads or resume downloads that have failed.The Microsoft Download Manager solves these potential problems.It gives you the ability to download multiple files at one time and download large files quickly and reliably.It also allows you to suspend active downloads and resume downloads that have failed.Microsoft Download Manager is free and available for download now.AzụOzo na-esote
Ụdị:2013Aha faịlụ: proofingtools_ig-ng-x86.exeproofingtools_ig-ng-x64.exeụbọchị Ebipụtara ya:7/1/2013Nha faịlụ : 849 KB900 KB
Ị chọrọ ịlele nsụpe maka asụsụ nke Office arụnyeghị na-akpaghị aka? Ị nọ n’ebe ziri ezi. Microsoft Office Proofing Tools gụnyere ngwungwu nke ngwaọrụ nyocha zuru oke dị maka Office n’asụsụ a. Naanị rụnye ma malitegharịa Office, yana ngwaọrụ nyocha maka asụsụ gị dị njikere ịrụ ọrụ.
Nbudata a na-arụ ọrụ na programmụ ndị a” Microsoft Office Excel 2013 Microsoft Office OneNote 2013 Microsoft Office Outlook 2013 Microsoft Office PowerPoint 2013 Microsoft Office Word 2013
Iji rụnye nbudata a: Rụnye ngwaọrụ nyocha: Budata faịlụ ahụ site na ịpị bọtịnụ Budata (n’elu) yana ịchekwa faịlụ ahụ na diski ike gị. Bido programmụ ntọlite. Na ibe Gụọ Usoro Ikikere Ngwanrọ nke Microsoft, nyochaa usoro ndị ahụ, họrọ “Pịa ebe a iji nabata igbe nrịbama Usoro Ikikere Ngwanrọ nke Microsoft”, wee pịa Gaa n’ihu. Ọkachamara ntọlite ahụ na-ebido ma rụnye ngwaọrụ nyocha. Ka nrụnye ahụ mezuru, malitegharịa mepee ngwa Office gị. Ntuziaka maka ojiji: Jiri ngwaọrụ nyocha ndị ahụ dị ka otu i si ejibu ya – ugbu a ị ga-ahụ ha maka asụsụ gị arụnyere ọhụrụ. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịtọ asụsụ nyocha gị ka ọ bụrụ asụsụ ọhụrụ maka iji nlele nsụpe (ọ bụrụ na ọ dị) – iji mụọ otu esi eme nke ahụ, hụ Gbanwee n’etiti asụsụ dị iche iche site na ịtọ asụsụ nyocha Iji wepu nbudata a: Na menu Mmalite, tụọ aka na Mwube wee pịa Ogwe Njikwa. Pịa ugboro abụọ na Tinye/Wepu Programmụ. Na ndepụta nke programmụ ndị arụnyere ọhụrụ, họrọ Microsoft Office Proofing Tools 2013 – [Asụsụ] wee pịa Wepu, Wepu, ma ọ bụ Tinye/Wepu. Ọ bụrụ na igbe ụbụbọ gosi, soro ntuziaka iji wepu programmụ ahụ. Pịa Ee ma ọ bụ ỌDỊMMA iji kwenye na ị chọrọ iwepu programmụ ahụ. Akurungwa yiri
Ngwaọrụ nyocha maka Ngwungwu Asụsụ Office: otu ntụle